सुख्खा भाग्य हिँडेर रेगिस्थान त भेटिएकै थियो
यति मै काफ्फि हुनुपर्थ्यो
जिन्दगीको अन्तिम सिमाना
तर कहाँ कहाँबाट आइपुग्यो मेरो ठेगानामा
अगेनाबाट आगो चोरेर हिँडेको बतास
र बलिरहयो मेरो अन्तिम इच्छा समेत नसोधी
एककोहोरो तानासाहाको युद्ध जसरी ।
बिहान नौ बजे
आफ्ना गुच्चा जसता आँखाहरु टेवलमा रखेर
मेरो अनुहारमा भिर दगुरेको देख्छ
आगनमा फुलेको शिरिसको बोटमा
बसन्त आएर उभिएको भर्खरै हो
तर अझै पनि उसको मगजमा साउन हिँडेको बगर छ
र अनुहारमा कुहिरो पोतिएको पहाड छ
शीतका पाइलाहरु कुल्चँदै कुल्चँदै
सपनाको राजमार्ग छिचोल्दै छिचोल्दै
आइपुगें छु एक विरानो भूगोलमा
जहाँ तर्सन्छु आफ्नै छाया नमिलेको देखेर
जहाँ एक कुनामा उभिन्छ साहूका राता आँखा
अर्को कुनामा देखिन्छ
भुइँतिर खसेका पंखेटा र आकाश छुन उडेका सपनाहरुको जुलुस
र मध्य बिन्दुमा उभिन्छ
ठेगाना नबिराई आएको आमाको चिठी-चित्र
Posted by Unknown at 10:26:00 AM2comments:
मृत्यु आइपुग्ने ठेगाना
मेरो घरसम्म आइपुग्दा बतास पनि एक पल्ट अलमलिन्छ
मेरो घरको छानो बाट उडि गएको चंगा
लटाई सम्झेर सरासर फर्कन सक्दैन
स्वयंम मेरी प्रेमिका
दसौं पल्ट सोधेर आइपुग्छिन मेरो ठेगानामा
मेरा साथीभाइ / आफन्त
सयौँ पल्ट सोधेर आइपुग्छन् मेरो आगनमा
वर्षौं पहिले प्रदेशमा हुँदा बा आमा सम्झेर रजिष्ट्ररी पत्र पठाए थें
म नै अए पहिले,
आफ्नै ठेगाना सोध्धै सोध्धै हुलाकी पत्र आएन
त्यो साँझ अक्षरहरुमा टेकेर धुँवा हिड्यो ।
काभ्राको बोट तिर आउँदै गरेको वसन्त । नबिर्सी फुलेको गुलमोरको बोट । मुनाहरुमा सिउरीदै गरेको चराहरुको गीत एकै पल्ट हरायो मेरो गुरुको जीवनको बृतबाट ।
जसको आगनमा बसेर हामीले अक्षर चिन्यौं । जसको दैलोमा उदाउने घाम टिपेर हामीले जीवनको आयतनमा उज्यालो फैलायौँ । जसको सहाराले हामीले हरदम हक्षरको बाटो हिँड्न सिक्यौँ र जीवनको लयमा एउटा अर्को रिदम थप्यौँ । उनै डम्मर सर धुवाँ भएर आकास तिर उड्नु भयो । आफ्नै छयाँबाट सधैको लागि बिलाउनु भयो ।
त्यो साँझ डम्मर सर हामीलाई जीवनकोलय सिकाएर आफु जीवनबाटै हराउनु भयो ।
अठार वर्ष अघि मेरो प्रथामिक र निम्न माध्यामिक कक्षामा डम्मर सर अलराउँडर टिचर हुनुहुन्थ्यो । हजारौँ बिद्यार्थीको आँखामा सधै चक्रवत घुमिरहने माड्साब अब कहिलै नर्फने गरि बिदाहुनु भयो ।
बाघबजारको एउटा चिय पसलमा कविहरुछन् । त्यहि हूलमा मिसिएको छु म । मेरो आँखामा कविता बगेको छ । कानामा सुन्दर कविताका बिम्बहरु ठोकिदै फर्कदै गर्दैछन् । अक्सर कविताको संगीत मेरो कानमा परावर्तन भईरहन्छ ।
नेपाल मेडिकल कलेजमा मृगौलामा स्टोनको अपरेसनको पालो पर्खेर बसेके छु । डाक्टरले फेरि अर्को हप्ता बोलायो । दवाइ दियो र पठायो । अझै अर्को हप्ता हेरौँ भनेको छ ।
सानया म बौलाहें ।
प्रिय सायन !
एका विहानै चराहरु मेरोे मनको आकाश भएर, बादलको थुम्कामाहरुमा आफ्नो गीत छाडि गए । म तीनै चरहरुको गीत, यो झरिमा सुनिरहेंछु ।
हरेकपल्ट चराहरु आकाशमा उड्दा हाम्रो प्रेमको लय टिपी लैजान्छन् । म निदाउनुअघि चराहरुले मेरो कानमा एउटा आदिम प्रेमको लय भरिजान्छन् । हाम्रो प्रेम चराहरुको बस्तीमा फेमस भएको छ ।
म प्रेम सिकाउने पाठशालाबाट भर्खर आएको हूँ ।
पाठशालाको भित्तामा तिम्रो उज्यालो अनुहारको चमक टासिएको छ । बतास, तिनै अनुहार बोकेर दूर भूगोलसम्म उडिहिँड्छ । बस्तिसम्म पुगि जान्छ । प्रेम रुखका हाँगाहरुमा छाडिजान्छ ।
मेरो आँखाको किनारामा बग्ने सम्झनाको नदी तिमीलाई । यो मुटुको गतिमा अड्कने तिम्रो प्रेमको कसम । चराहरु उडिजाने बाटोमा प्रेमको सगुन राखेको छु । हाम्रो प्रेम सिकि उड्ने चराहरुको कसम । म तिमीलाई सधै–सधै प्रेम गर्छु ।
म बौलाहाउनुअघि उनको यो पत्र दश हजारपल्ट पढें ।
यो सहरको रैथाने चौकमा म बौलाहेंछु ।
कसरी पो बौलाहें ?
पुरापुर हेक्का छैन ।
एकाएक चराहरुसँग उडौँ लाग्यो । नदीसँगै बगुँ लाग्यो । बादल सामातौँ लाग्यो । रुखमा आमाको अनुहार झुन्ड्यो । टुडिखेल मेरा बाको विर्ता हो, भने छु । मेरो देशको सासकको टाउकोको भकुन्डो खेल्न मनलाग्यो । धरहरामा उभिएर सिंहदरबारतिर फर्केर मुति दिन मनलाग्यो । आफ्नै टाउको बिक्रिमा राखेँ छु । साहूसँग हिसाब मागे छु । घामलाई नउदाउन भनेछु । यो देशको मालिकसँग मेरो हिसाब मिलेन । मैले आफ्नो हिसाब खोजें । म बिउजिएँ , निदाउँदा निदाउँदै । म नाचें हिँड्दाहिँड्दै । म सुतें उभिँदा उभिँदै ।
अन्जान सालिकसँग बात मारेछु । टाउकामा किरा प्यो । फनफनी टाउको घुम्यो । नयाँ सडकमा नाङगै हिँडे । दुनियाले लाज मान्यो । र, मलाई बौलाहा घोषणा ग्यो ।
आफ्न्तले समातेर पाटन अस्पतालमा पु्याए ।
म सद्दे छु ।
अरु सबै बौलाहा । डाक्टर बौलाहा । नर्स बौलाहा । प्यसेन्ट बौलाहा । टेवल बौलाहा । कुर्ची बौलाहा । सिरिञ्च बौलाहा । दैलो, जस्केलो । औषधी सबै सबै बौलाहा । म कराए । झ्यालका शिशाहरु चर्के ।
एउटा सेतो पैहिरनमा आएको डाक्टरले मेरो नाम सोध्यो ।
बोल्न मन लागेन, बोलिनँ ।
भन्न मन लागेन, भनिनँ
‘बिहे गरेका छौ ?’
‘कति पढेका छौ ?’
डाक्टरलाई एक झापट हिर्काए । मलाई आफ्न्त र अरु अरुले समाते । म रुन थालें ।
कसलाई सम्झेर रोएँ याद भएन ।
तुरुन्तै हाँसे । के सम्झेर हाँसे सम्झना भएन ।
सायद यसै कारण मलाई दुनियाले बौलाहा भन्यो होला ।
डाक्टर हैरान भएर गयो । मलाई पागलहरुको वार्डमा छाडियो । मेरा आफन्तहरु पनि गए ।
कोही आफ्नै गाला चिमोटिरहेका छन् । कोही घुडो चुसिरहेका छन् । शायद अफ्नी आमाको धूद सम्झदा हुन् । कोही एक, दुइ पढिरहेका छन् । कोही आफनी प्रेमिकालाई गालि गरिरहेका छन् । कोही जुम्रा हेरि रहेकाछन् । कोही ऐनामा अफ्नै अनुहार नचिनेर सोधिरहेका छन् ।
भित्तामा एउटाले लेख्यो
प्रश्न बाहादुर ?
अकसमात कोहि चिच्यायो —मेरो दुरपिन खोई?
‘मेरो ल्याबको गुच्चा खोई ?’
अर्काे करायो —‘भान्टा खोई ?’ भान्सामा आज भान्टाको खिर पकाउने ।
‘होइन कोदाको हलुुवा ।’ अर्काेले असहमती ब्यक्त ग्यो ।
फेरी अर्काेले आफ्नो रिजल्ट सुनायो—‘मेरो मार्कसिटमा जिरो नम्मर । म सधै फेल ।’
कर्आे बोल्यो —‘साला डाँकाले मेरो मुटु कलेजो लग्यो ।’
—‘आजको मिड नाइट अटमा सेक्सी मोडलको क्यटवाक हेर्नु छ ।’ अर्काे एक कुनाबाट करायो ।
उफ, यो पागलहरुको वस्तिमा कसरी बसौं ।
अब मैले आफैले फेरि घोषणा गरें ‘म बौलाए ।’
ड्ड पासाको होटलमा
मानसिक वार्डबाट । रातारात भागेर पासाको होटलमा पुगें ।
पासाको होटलमा पनि मैजस्ता बौलाहाहरु आउँछन् । टाउको फुटुन्जेल रक्सी पिउँछन् । माकुराको जालोमा अल्झिएको छ —तिनको विगत र वर्तमान । कतिले यही जालोमा आत्महत्या गर्ने असफल प्रयास गरे । कोही कोही उदारोमा बेसमारी पिउँछन् । आफु जन्मनु अघि मरेका हजुरबालाई सम्झेर रुन्छन् ।
एउटाले रक्सीसँग मुछेर भात खायो । अर्काले गिलासमा, मुछेको भात हाल्यो र बाहिर निस्क्यो । यो पासाको होटल बौलाहाहरु पालेर बसेको छ । अनेकथरिका पागलहरु आउँछन् ।
बिहान एउटा मलामी गएर आएको छ । आज उसले मासु खाएन । भन्यो ‘मान्छेको मासु र खसीको मासुमा फरक छैन ।’
अर्काेले भन्यो ‘मलाई मान्छे र कुकुरको मासु सबै भन्दा मीठो लाग्छ ।’
मलामी गएर आउने मान्छे उठेर गयो । शायद यो हामी भन्दा सद्धे छ ।
हुन त पासा पनि बौलाहा नै हो । अफ्नै ग्राहाकले स्वस्नी उडायो । एक मैनापछि फेरी एक साँझ एक ग्रहाकसँग छोरी पोइल गई । केही बोल्दैन । रक्सी बेच्छ । र, बेलुका निदाउँछ ।
साला पासा भाग्यमानी छ । एकलै कमायो । एकलै खायो । अब एक्लै मर्छ ।
यही होटलमा हो । मलाई सानियाले छाडेर गएकी । अन्तिमपल्ट यही टेवलमा उसको अनुहार दियो झैं बलेको थियो । उसको आवज संगीत झैं सुनिएको थियो । उसको हिँडाइमा बेग थियो । उसको आँखामा प्रेमको भाषा थियो । उसको टाउकोमा मेरो मगजको मिश्रण थियो ।
त्यो दिन उसले मलाई मनपर्ने उपहार दिएकि थिई । सिटिसेन्टरमा हामीले अंग्रेजी सिनेमा ‘लाइफ अफ पाइ’ हेरेका थिययौँ । फर्कदा अनेकथरिका चक्लेट किनिदिई । मेरो आखाँमा आफ्ना आँखाहरु मिसाएर भनेकी थिई ‘तिमी सधै प्रेमको लयमा बाँच ।’
साझ परिसकेको थियो । जुन उनको अनुहारको बाटो भएर जमिनमा लमपसार थियो । जुन साँक्षी राखेर उनले मलाई बिस्तारै आफ्ना हातले खेलाएकी थिई जसरी स—सना नानीहरु अफ्नो मन परेको खेलौना खेलाउँछन् । प्रेम गर्छन । अँगालो हाल्छन् । ठिक उसै गरेकी थिई ।
त्यस दिन हामी सिटिसेन्टरबाट हिँडेर भक्तपुर पासाको होटलमा पुगेका थियौँ । सदै झै एक, एक गिलास पियौँ ।
एक आँैलाले जुन देखाएर भनेकी थिईन ‘सायन यो जुन तिमीलाई उपहार भयो ।’ मैले जुनलाई अँगालो हालेर आफ्नो बनाउन खोजेको थिँए ।
पासा मलाई देखेर बेस्मारी हाँस्यो ।
सधै घाम पानीको सम्बन्ध थियो । म घाम हुँदा उनी पानी, उनी पानी हुँदा म घाम । सधै हामी सुन्दर मौसम थियौँ ।
पासाको होटलमा पिउँदापिउँदै उनका ओठ काम्न थाले । निदारमा पसिनाका मसिना दानाहरु उठे । कुनै फुटे । र, ओरालो बगे । मैलै उनको हात समातें र ओठसँग ओठ जोडें । बिस्तारै उनले भनिन् ि‘सायन केही समय तिमीलाई छाडेर जाँदै छु । कतै टाढा ।’
उनी गइन ।
दुर देश । जापान गइन ।
फोटोमा साकुराका फूलहरु पठाउँथिन । म गुँरास पठाँउथें । हाम्रो चिठ्ठी बोकि जाने हुलाकी हाम्रो प्रेम देखेर टोलाई उभिन्थ्यो ।
म बिस्तारै प्रेमको समुन्द्रमा डुब्दै गए । उनी हिमाल भएर उभिदै गइन । जापानबाट उनको छाया एकाएक आउँथ्यो र मलाई चुम्मन गरेर जान्थ्यो । मेरो छाया एकाएक उनको सहर पुग्थ्यो र दुनियाको आँखा छलेर उनको चुम्मन बोकी आउँथ्यो । उनी हुँदा यो दुनिया रंगिन लाग्थ्यो ।
सधै मेरो झ्यालमा एउटा ईन्द्रेणी आएर उभिन्थ्यो ।
एक हप्तासम्म मेरो झ्यालमा इन्दे्रणी आएन । हुलाकीले साकुरा बोकि ल्याएन । मेरो घरको बाटोमा उनको छाया हिँडेन । रुखको हाँगाबाट अचानक गुँड छाडी उडी हिँडे, चराहरु । ठूलो हुरीले, सधै हासीरहने उनको तस्बिर उडाएर लग्यो ।
हरेक बिहान उनको छाया बोकि ल्याउने घामले उनको मृत्युको समाचर बोकी ल्यायो र मलाई एक्लै छाडेर पश्चिमतिर लाग्यो ।
त्यो दिन साँझ म नगरकोट पुगेको थिएँ । मसँग, म थिइनँ । मेरा ईन्द्रियहरु मरेका थिए । हिउँदको नगरकोटमा मलई गर्मी भएको थियो । अब सानयाको छायाँ कहिल्लै बोकी नल्याउने कसम खाएर घाम पश्चिमको डाँडाबाट ओरालो खस्यो । र, मेरो आँखाबाट बिलायो । मलाई एक्लै छाडेर घाम पनि गयो र सानिया पनि गइन् ।
सबै हरिया पातहरु खसेको रुखका हाँगाबाट एक हुल चराहरु उडे । चराको छाया मेरो टाउकोको बाटो भएर गयो । चराले सानयाले पठाउने पत्रको सम्झना आँखामा फालिदियो ।
त्यस पछि चराले आफुसँगै लिइ गयो मेरो आँखाको निद्रा । मेरो कानको आवाज । मेरो इन्द्रियको चेतना । म ढुंगो भएछु । म माटो भएछु । म नदि भएछु । म पहाड भएछु । म सब थोक भएछु र केही भैइनछु ।
सडकमा म बेमान्छे भैइ हिँडेछु ।
अचानक मगज सानिया तिरै फर्किगयो । मेरो चेतना उनी हिँडेकै बाटो तिर फर्कि गयो । म सडकमा एककोहोरो टोलाई हिंड्दो रहेंछु ।
जीवन, एक मृत्यु स्खलन
कहिले काँही संयोगहरुले काम गर्छन् । तर,आज गरेन । यो सडक किनाराको घरमा कसैले बास दिएको भए संयोग हुने थियो । तर भएन । आजको रात बिना संयोग बाँच्ने छु ।
काठमाडौँ जाने बसमा छु । मध्ये रातको बाह्र बजेको छ । भोलि, नेपाल बन्दको सूचना बोकेर बतास,घरि यो कान घरि ऊ कन गरिरहेको छ । सरासर काठमाडौँ जाउँ । भोलि फर्कन सक्दिन । काम छ, गल्छि त्रिसुलीमा । जे परोस, रोकें गाडि । उत्रें अध्यारो सडकमा ।
म किन अचानक सडकमा उत्रें । अव, सम्झनु छैन ।
लागें नुवाकोट जाने बाटो तिर । एकलै छु । डर छैन र सम्झनु छैन त्रासका बल्यकहोलहरुलाई ।
अलि पर सडक ल्यामपोष्ट मुनी उभिएँ । किराहरु घुमिरहेछन् ल्यामपोष्ट ओरीपरी । हेरेँ आफूलाई । ठ्यक्कै लाग्यो किरा जस्तो । अलि ठूलो किरा । हातमा बोकिराखेको पानी पिँए । उत्तिनै खेर मोबाइलमा घन्टि बज्यो । ए मत मान्छे पो त । सम्झेँ । म मान्छे किरा ।
नुवाकोट जाने बाटो, अलि परै पुगेँ । गाए,ँ ग्यङनम स्टायल......... । कसैले सुन्यो सुनेन । त्रिसुलीले चाँहि सुसेली हाल्यो । बग्यो मेरो ग्यङनम स्टायल.........ओरालै ओरालो । नाचेहोलान ढुङगाहरु । उफ्रेहोलान माछा ।
आज रातभर त्रिसुलीसँग जिस्कनु छ । र, पर्खनु छ, बिहानको उज्यालो । हेर्नु छ भोलि बिहान सवारी नगुडेको रित्तो राजमार्ग ।
डिलमा उभिएँ । हातमा उठाएँ ढुंगोे र हाने पानीमा । अफ्नो गति बिथोलिएको भाबमा हल्लियो नदी । सम्झें, जिन्दगीको गति पनि यसै गरि बिथोलिन्छ । कहाँ, कसले कुन बेला, हान्छ ढुंगो । र बिथोल्छ जिन्दगीको गति । भोक, अभाब, दुःख, खुसी, प्रेम, सुख केकेले बिथोल्छ जिन्दगीको तलाऊ र पाहाड झै श्रींखलाहरुमा उभिन्छ, जिन्दगी ।
सडकै सडक अलि परै पुगे पछि फेरि फर्कि आँए । रातको एक बजेको छ । किनाराका घरहरु, थामेर उभिएकोछ, नदीको बेग । जसरी उभिन्छ, समयको बेग थामेर जीन्दगी ।
गल्छि चोकैमा छ, एउटा होटल । जहाँ अझै बाँकी छ, चहलपहल । छिरें । बिसाएँ झोल र सोधें ‘दाई यहाँ सुत्न पाइन्छ ?’
‘पाइदैन । सबै प्याक छ । ’
यतायत मज्दुरहरुको भिड छ । साहू मध्यरातीसम्म रक्सी बेचिरहेछ । म जस्ता कति आउँछन जान्छन् सबैलाई राखेर कहाँ साध्य ।
मान्छेहरु हल्ला बीच आ–आफ्नै जीवन बाँचिरहेकाछन् । बिर्सदै छन्, दिनभरको थकान । मान्छेलाइ कसरी दौडाउँछ सपनाले फेदिदेखि टाकुरासम्म । कसरी पुर्याउँछ जन्मदेखि मृत्युसम्म । हरेकको अनुहारमा जीवनको दौड कुदिरहेको छ । जीवन एउटा सपनाहरुको दौड हो । यी मज्दुरहरु, मालिकहरु सबै आ–आफ्नै दौड्मा कुदिरहेकाछन् ।
आज यतै सडक तिर बिताउँनु पर्ला । खाना मलेखुमा खाँए । धेरै पछि एक्लै यसरी रात रात भर हिंड्दै छु । अलिक पहिले काठमाडौँमा एक कवि र म रातभर हिंडेका छौ । आज आँखाको एक कुनामा उनको सम्झना आई उभियो ।
तर,लगतै उनलाई बिर्सेँ ।
दाईको घर कता । एक किसोर भाइले सोध्यो ।
‘यता कता ?’
‘यसै डुल्न ।’ पत्याएन ।
‘भाइ तिम्रो घर कता नि ?’
‘मलेखु । ’
‘के गर्छौ ?’
‘ट्रकको कलासी ।’ गर्वले भन्यो ।
म पनि खलासी हूँ । जिन्दगीको । सधै बिहान बेलुका ढ्याढ्याप पार्दै चलाउनु पर्छ ।
के बुज्यो ! हास्यो । उसले खाना खाई सकेको रहेछ । उठेर हिंड्न खोज्दै थियो । मसँग बिदा माग्यो ।
अब होटल साहू उज्यालो निबाएर सटर तान्दै छ । एकाद पनि उठेर हिंडिसकेकाछन् । सडकका म छु र मसँग हिँडिरहेने मेरो छायँ छ । बिजुलीको उज्यालोमा मेरो लामो नाक अज्जै तन्कियो ।
मलाई त मेरी आमाले जन्माएकी हुन तर यो छायालाई कसले जन्मायो ? रात बिरात मैसँग हिँडिरहन्छ । म रुँदा हाँस्दा मैसँग हुन्छ । दुनियाँमा कोहि नभए, मसँग छाया हुन्छ । यहि छायाले मेरो गीत सुन्छ । मेरा कविताहरु टिपी हिँड्छ । मलाई एक्लो हुनबाट बचाउँछ र खुसिहरु कुदी हिँड्ने बाटो तिर लैजान्छ । यहिँ छाया हो, मेरो चित्र भित्ता भित्तामा टाँगी हिँड्छ र मलाई ‘रमेश सायन’ चिनाउँछ । कहिलेकाँही म आफ्नै हुलिया बिर्सन्छु र छाया हेरेर आफुलाई भेट्छ,ु एक नक्सामा ।
अग्ला डाँडाहरुबाट खसेको छाया त्रिसुलीमा तैरी रहेको छ । यत्रो बेग बोकि हिँड्ने नदीले छाया बागाइलान सकेन । छायासँग नदी हारेको युद्ध बगिरहेको छ ।
छाया, मान्छेलाई अनुहारको चित्र सिकाउँने पाठशाला हो । हरेक उज्यालोमा चित्र बोकेर उभिन्छ ।
मेरो छायासँगको यात्रा कसैले बिथोलिदियो र ट्ररकको क्यविनबाट बोलायो दाइ आउनुहोस् ट्रकमै सुतौँ । एसो टाउको उठाएर हेरें । अघिको खलासी भाई रहेछ ।
मसँगै छाया पनि ट्रकमै चढ्यो ।
मोबाइलमा फेसबुक खोलें । अझै केहि साथीहरु अनलाईन छन् । फेसबुकको कमाल बुजिनसक्नु छ ।
‘दाई मोबाइलमा फिल्म छैन । ’
‘छ । हेर्छौ ?’
‘हेर्छु । ’
खोलँे ल्यापटप र क्यराभ्यन प्ले गरें । खलासी भाई फिल्म हेर्न थाल्यो । नेपाली सब टाइटल बिस्तारै पढिरहेको छ । लामो लामो संबादको आदा वाक्य मात्र पढ्न भ्याउँछ । यो फुच्चे पनि जिन्दगीको क्याराभानमा थिन्ले हो । यसले पनि छिचोल्नु छ, जिन्दगीको क्याराभान । हिड्नुछ, पुर्खाहरु हिँडिगएको बाटो । उसै गरि बिलाउनु छ हिँड्दा हिँड्दै बाटाबाटै हराएको पुर्खाहरुको आदिम पैतला झै ।
दिक्क मानेछ क्याराभान । भन्यो, बुजिन । र, सोध्यो, ‘दाई सन्निलिओनको छैन ?’
‘के जिस्म टु ?’
‘हैन अरु ।’
‘छैन । भाई । यहाँ नेट राम्रो चलेको छैन । नत्र देखाई दिन्थें ।’
‘मैले जिस्म टु हेरेको थिएँ । सन्नि निक्कै सेक्सी लागेकी थिई । त्यसैको ब्लु पनि छ रे हेर्न मन थियो’ । उसले भन्यो ।
यो फुच्चे पनि पुर्खाहरु हिँडेकै बाटो हिँडि आयो र यो त्रिसुली किनारामा उभियो । तर पुर्खाहरु भन्दा जिन्दगीको स्वद फरक फेरिरहेछ —ऊ । छामिरहेछ, दुर दराजका अंकहरु । र, आफनै मनसँग कमुक बनिरहेछ । अचेल, कयौँ पल्ट सपनामा सन्नि लिओन आएर, उसलाई बिथोलेर जाँदि हो ।
जिवनका अनेक स्वदहरुछन् । कुनै तिता । कुनै मिठा । जिन्दगी जन्म र मृत्युको कक्टेल पाटि जास्तो लाग्छ ।
खलासी भाई स्टेरिगं छेउमा निदायो । म ओल्लो सिटमा बसेर फेसबुक चलाई रहेको छु । यो राती एक मित्रलाई रुगा लागेछ । राख्यो स्टाटस ‘रुगालाग्न थाल्यो ज्वरो आउला जस्तो छ ।’ कमेन्टमा लसऐन्जल बस्ने एक भुटनिज साथीले सु—स्वस्थेको कामना गर्यो । सायद त्यो स्टाटसवला खुसीको स्खलनमा हरायो होला ।
अचेल मान्छे बाँच्ने कला फेरिएको छ । सहरको मध्य विन्दुमा होडिङबोड भएर उभिन चाहान्छ, मान्छे । आफ्नो स—साना दुःखहरु बाँड्छ र अरुबाट सम्बेदना लुट्छ ।
अचेल हरेक दिन मान्छेहरु सम्बेदना लुटिहिँड्छन् । सायद कतैबाट प्रेम नपाए पछि मान्छेले सम्बेदानाबाट पनि प्र्रेम महसुस गर्दो हो । र, अलिकति खुसि समेटेर उभिदो हो ।
खलासीको टाउको अहिले स्टेरिङमा अडिएको छ । भोलि उसलाई यो स्टेरिङको टाउकोले कहाँ पुर्याउँने हो । जिन्दगीको स्टेरिङ कुन मोडमा पुगेर मृत्युबाट स्खलित हुनेहो, कसले भन्न सक्छ ?
अखिर जीवन मृत्युको स्खलन त हो । एक दिन जीवन मृत्युबाट स्खलित हुन्छ र सकिन्छ ।
फकिर हिँडेको बाटो
‘जिन्दगीसँग कुनै गुनासो छैन । यतिका वर्षसम्म जिन्दगीले मेरो बिरुद्ध कुनै उजुर गरेन ।
‘सलाम जिन्दगी !’ बिना उजुर, मसँग मिलेर, मैले जे गरे पनि सहेर, बाँचेकोमा ।’
सधैको साँझ रक्सी पिउनु अघि मुसाखानले जिन्दगी प्रति बिषेश आभार ब्यक्त गर्छ । रक्सी पिउँदा पिउँदै उसको साससँग ठोकिएको बतास पनि बेसमारी मात्छ । र, लरखराउँदै अगाडि बढ्छ
हरेक साँझ बेसुर भाकामा रक्सी पिउँछ । — मुसाखान ।
‘सायन मेरो जीन्दगी ठिक बालुवाको घर जस्तो छ । हैन, हैन ठेगाना विहीन बतासमा उडिरहेकोे काँस फूल जस्तो ।’
ऊ एकोहोरो मेरो सामु जिन्दगी परिभाषित गर्न खोज्छ । कतै अटाउँदै परिभाषामा जिन्दगी ।
एक ‘लार्ज पेग’ लोकल पिए पछि भन्छ ‘मिल्ने भए मेरो गिदी मोजामा हालेर भकुन्डो खेल्ने थिए ।’
आफ्नै गिदीको भकुन्डो खेल्ने π बेबकुफ मुसाखान ।
यो मुसा जिन्दगीको फकिर हो । यसको जात, थर, धर्म कसैलाई भन्दैन । झोलामा बेद, कुरान लगायत अरु धेरै किताब छन् । प्रस्ट नेपाली बोल्छ । बिहान मन्दिर जान्छ र मध्यान्न मस्जिद पुग्छ ।
हिजो, ऊ र मसँगै लुम्बिनी घुमेका थियौँ । विश्वशान्ति स्तुपाको अगाडि तीन घण्टा ध्यान ग¥यो । फर्कदा भैरहवामा बेस्मारी रक्सी पियो ।
अस्ति काठमाडौंमै हुँदा जामे मस्जिद छेउबाट हिन्दीमा उल्था गरिएको कुरान किन्यो । किन्दा किन्दै कुरान माथि अर्काे किताब राख्यो ।
पसलेले गालि ग्यो । कुरान पढ्ने तरिका बतायो ‘यो किताब माथी अरु किताब नराख्नु । बिहान उठेर नुहाए पछि मात्र पढ्नु । भूँइमा राखेर नपढ्नु ।’
हिड्ने बेला पसलले सोध्यो ‘के तिमी स्लाम हैनौँ ?’
पसलेले मुसाको अनुहारमा पुलुक्क हे¥यो ।
मुसाले पनि पसलेको आँखासँग सिधा आँखा जुधाएर उर्दूमै कुरानको एक सुर “अल्–फातिहा” फट्फटायो ।
लगतै सामवेदकोे एक ऋचा पनि
र, त्याहाँबाट टाप कस्यो ।
धेरै वर्ष पहिले मुसाखान एक दिन ज्योतिषीकहाँ गएको रहेछ ।
ज्योतिषीले तेरो राज योग परेको छ । देशको ठूलो मन्छे हुन्छस् भनेछ ।
मुसाले एक सय दान ग¥यो र धेरै दिनसम्म आफू ठूलो मान्छे भएको सपना देख्यो । उसको आङमा फुर्ति, उसबेला बतासको बेगमा पसेको थियो ।
अहिले मुसाले त्यो ज्योतिषलाई भेटे दुइ लात्ति हानेर एक सयको बदला पाँच सय मागौँला झै गरेको छ ।
ऊ सानसँग भन्छ ‘म भूगोल बिहिन फकिर हूँ ।’
बिसायो, उसले आफ्नो जात, धर्म, नाम, ठेगाना । बन्यो, मुसाखान फकिर । हिड्यो,जिन्दगीको पछाडि नफर्कि अगाडि अगाडि ।
ऊ भन्छ ‘जीन्दगीको पछाडि फर्केर के काम ? मृत्यु पछाडि हैन अगाडि हुन्छ । हामी सबै मृत्युको म्याराथुन धाबक हौँ । दौड जित्न पछाडि हैन अगाडि दौडनु पर्छ ।’
मुसाखान, हरेक दिन निदाउनु अघि जिन्दगीको डाटा डिलिट गरिदिन्छ ।
भोलि पल्ट, एउटा ताजा जिन्दगी बाँच्छ ।
आफु कसरी फकिर भयो ? स्वयम विर्सिन्छ —ऊ —आफ्नो जिन्दगीको रमकहानी ।
यो फकिरको अनुहारको भाव फेरबदल हुँदैन । चाहे त्यो अमिलो या पिरो किन नखाहोस् ।
जीन्दगीमा कुनै कुराले प्रभाव नै पार्दैन । आमा–बाबुको कुरा या अन्जान व्यक्तिको । केहीले छुन सक्दैन ।
ऊ, आम जीवनको प्रक्रियामा असामान्य बाँचेको छ । यस्तो जिन्दगी कसैले बाँच्न सक्दैन । मुसा समाजको असामाजिक प्राणी हो ।
यो फकिर जंगल, ओडार या पुलमुनी, घर वा होटल जहाँ पनि बास बस्छ ।
खान कहिले मागेर कहिले काम गरेर खान्छ । कहिले हिमाल पुग्छ । कहिले तराइ आसपास घुम्छ ।
मैले भेट्नु अघि ऊ केरला भारत डुलेर आएको रहेछ ।
उसलाई बाच्नु छैन । मर्नु छ । तर, हतारमा हैन । सबै देखेर, भोगेर । आयु पु्¥याएर मर्नु छ ।
सोच्दै छु । आजको साँझ फकिरले के गर्ने हो ? रक्सी पिउँछ या लियो टोल्स्टोयकोे वार एण्ड पिस पढ्छ । देवकोटाको शाकुन्तला पढ्छ वा माधब घिमिरेको गौरी पढेर रुन्छ या हाँस्छ । माओको बायोग्राफि पढ्छ । कार्लमाक्र्सको पूँजी पढेर भोक्कै निदाउँछ । ऊ जे पनि गर्न सक्छ । उसको पछि लागेर हिंडनुको मज्जा यहि हो ।
हामी यतिखेर भैरवाबाट हिंडदै बुटवल आइपुगेका छौ ।
घाम तिनाउ तरि सकेको छ ।
फकिर तिनाउ किनारमा बसेर मस्त गाँजा पिइरहेको छ ।
यो झिझो फकिरसँग दिन बिताउन मलाई रहर भन्दा लोभ हो । ऊ कसरी फिरन्ते भयो । कसरी मुसाखान बन्यो । थाहा पाउने रहर छ । ऊ बाँच्ने शैलीको प्रभाब मेरो मगजले उचालि रहेको छ । तर ऊ हत्तपत्त आफ्नो जिन्दगी वाचन गर्ला जस्तो छैन ।
आफुले तान्दै गरेको चुरोटको ठुटो लम्काउँदै भन्यो ‘सायन गाँजा तान्छौ ?’
‘तान्दिन । मेरो फेक्सोमा असर छ धुँवाको ।
ऊ बिना भाव हाँस्यो ।
हिउँदको तिनाउ बग्न मात्र बगेको छ ।
पारी मैना बगरमा अटो ग्यारेजको घाइघँुइ छ । रिक्सा, गाडि र पैदलयात्रीको भिडमा तिनाउ पूर्ववत परिचित छ । तर यो फिरन्ते मुसाखानको अनुहारसँग तिनाउ झस्कन्छ । र,मलाई कानमा खुसुक्क भन्छ ‘यो फकिरको पछि नलाग सायन तेरो जिन्दगी मैले बगाउने भेल जस्तो नबना । घर जा । यसको कथा मेरो किनारमा छाडि राख । सके म सुनौँला यसको कथा नसके मै बगाई लैजाउँला ।’
‘ए तिनाउ ! यो फकिरलाई बुझ्न सबैकाम छाडेर दौडिएको छु । मेरो आधा गिदी यसको टाउको देखेर हल्लि सकेको छ । यसको कथा सुनेर, की जीवन जिउँन सिक्छु कि कला सहितको मृत्यु मर्न ।’
मुसाले तिनाउ र मेरो बात सुने छ क्यार ! मतिर पुलुक्क हे¥यो । उसको आँखामा गाँजाको असर देखिन थालिसकेको छ । एउट लामो सर्काे धुँवा तिनाउ तरेर मैनाबगर तिर लाग्यो ।
‘सायन आज रातको कुनै बेश्यासँग बितउनु पर्छ ?’ म हाँसे मात्र । यो मान्छे कति बेप्रशंग छ ।
‘बिना मुड कस्तो योजना ?’
‘योजनाले जिन्दगी चल्दैन ब्यापार चल्छ । जिन्दगी ब्यापार हैन ?’
‘जाउँला तर तिम्रो बारे मलाइ भन ।’ शर्त राखें ।
मलाई थाहा छ ऊ मेरो शर्तसँग गल्दैन ।
‘म कथा बेगरको पात्र हूँ । रहरले यसै गरि घुम्छु । जसरी तिमीले आज भोलि देखि रहेकाछौ । तिमीले देखेको मान्छे भन्दा अर्काे मान्छे मसँग छैन । म तिनाउँको यीनै बालुवा हुँ । दुनियाले देख्ने गरि बिस्कुन भएको छु । म आँगन हूँ । म भित्र मजेरी छैन ।’–उ बोल्यो । स्पष्टिकरण दिएको शैलीमा ।
‘बालुवा भित्र पनि त केहि छ ।’
‘के हुन्छ बालुबा भित्र ? त्यो देखिने बालुबा मात्र हुँ । त्यो भित्र पनि यदि केहि छ भने त्यो हैन म ।’
‘प्रेम गरें स्कुल पढ्दा । कलेज पढ्दा । म घर छाडेर हिंड्नुु अघिसम्म प्रेम गर्थे ।’
‘अहिले पनि प्रेम गर्छाै ?’
‘हैन म नास्तिक । म धर्म मान्दिन ईश्वर मान्छु । धर्मले धेरै कुरा बर्जित गर्छ । इश्वरले धेरै कुरा फुक्का गर्छ । धर्म बन्दन हो । इश्वर स्तन्त्रता हो । इश्वर बतासमा उड्छ । धर्म जमिनमा हिंड्छ । इश्वर नदिमा बग्छ, धर्म पोखरीमा जम्छ । इश्वार आफै भित्र हुन्छ, धर्म आस्थामा हुन्छ । इश्वर चेतना हो । इश्वर इन्द्रिय हो । धर्म खिया लागेको मगजको उपज हो ।’
यो फकिरले मेरो मगज डामि दियो । म टोलाउन थाले ।
‘धर्म र इश्वार’ ?– म यो फकिरको कुरा आधा बुज्छु आधा बुज्दिन । यो आम मान्छे भन्दा खुसी छ ।
‘ए ! मुसा इश्वर मान्ने मान्छे तिमी जस्तै सपना बेगरका हुने भए दुनिया उकालो हैन ओरालो बग्ने थियो । मान्छेको गति सधै उकालो बगिरहेको छ ।’
‘सायन, धर्म बिभाजनको खण्डहर श्रृंखला हो । धर्मले समाजलाई खण्डहर बनाउँछ र आ–आफ्नो समूहमा बिभाजन गराउँछ ।’
ब्रमाण्डमा धेरै समूहहरु छन् जसले अनेक धर्मको नेतृत्व गर्छ । आफ्नो समाजको मात्र हित चाहन्छ । बिकास र आदिपत्य चाहन्छ । जव मान्छे धर्ममा आस्तिक हुन्छ तव द्धन्द्धको शुरुवात हुन्छ । द्धन्द्धले एक अर्कामा शक्ति ट्रान्सफरको काम गर्छ । भौतिक बिकासको श्रृंखला द्रुत गतिमा अगाडि बड्छ । हजोरौँ वर्ष अघि देखि धर्मले द्धन्द्धको सुरुवात ग¥यो र द्धन्द्धले शक्ति ट्रान्सफरको काम ग¥यो ।
आज समाज यो गतिमा दौडिरहेको छ । तर, इश्वर धर्म भन्दा माथि छ । आफ्नो इश्वर पत्ता लगाउने प्राणी ब्रमाण्डमा धेरै कम छन् । म जस्तै दुनियाले आपूm भित्र इश्वर महसुस गर्ने भए उहिल्यै यो पृथ्वीको गति उल्टो घुम्ने थियो ।
ऊ इश्वर मान्छ । धर्म मान्दैन तर द्धन्द्धबाट बिकसित शक्ति ट्रान्सफरको उपज भौतिक विकासलाई स्वीकार्छ । उ आफैमा द्धन्द्ध जस्तो लाग्छ ।
इश्वरीय द्धन्द्ध ।
यो कस्तो मान्छे । यो फकिर आफैमा द्धन्द्ध हो कि इश्वरको बाघचाल π
म उसको कुरा सुन्न सक्छु तर बुज्न सक्दिन । उसले फेरि चुरोटमा गाँजा भ¥यो र पुलको आडैमा उभिएर लामो सर्काे तान्यो
यस पल्ट धुँव बतासको बाटो भएर मेरो मगज माथि माथि उडिरहेको छ । उसले फेरि पनि एक्कासी बेश्यासँग रात बिताउने प्रस्ताब सम्झायो ।
यस पल्ट मैले डाठै अस्वीकार गरें ।
‘तिमी जाउँ म जान्न ।’ रिसाएको भावमा भनें ।
मेरो अस्वीकृतीको असर उसको अनुहारमा कतै देखिएन । उ रिक्सा चड्यो र गयो ।
उसको कथा पनि उहीसँग पछि लाग्यो । अब बाँकी मसँग उसको कथा समात्न नसकेको तिनाउँ किनारा र उसैको असरले हल्लिरहेको मेरो मगज मात्र छ ।
undefined Nawalparasi, Nepal